Ukuvelisa / Ukuvelisa Emva / Ukusasaza
Ukuvelisa / Ukuvelisa Emva / Ukusasaza IAshgabat Tele - Iziko leRadiyo (iTV yeTV) sisakhiwo esibalulekileyo, ubude buziimitha ezingama-211, kumazantsi eAshgabat, ikomkhulu laseTurkmenistan, kwinduli eyi-1024 m, ngaphezulu komphakamo wolwandle. I-TV yeTV yeyona nto iphambili kwiRadio neTV inkqubo yokuvelisa, ukuvelisa iiposti kunye nosasazo. Kwaye ungomnye wemizekelo efanelekileyo yesimo se-teknoloji yedijithali. Umabonwakude wenza iTurkmenistan ibe nguvulindlela kumsasazi we-HD osasazeka e-Asiya. Umabonakude weTV ngowona tyalo mali lukhulu kakhulu kwiminyaka engama-20 edluleyo kusasazo.
Umthwalo Wevili Isilayishi esisebenza kakhulu ngenxa yezizathu ezingalinganiyo sinokubangela ukuba umqhubi afumane ukugula kakhulu kwaye oko kubenza ukuba bazive bediniwe ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, i 'ARM LOADER' ivumela ukwamkelwa kwamanqaku okudibanisa emhlabeni kwaye inceda isihlalo somqhubi ukuba sizinzile kwaye singagungqi. Ke ngoko, iyanceda umqhubi ukuba angaziva ediniwe kwaye ibavumela ukuba bakwazi ukwenza umsebenzi wabo ngokukhuselekileyo.
I-Usb Flash Drive I-eClip lelinye ilizwe eliphepha lokuqala le-USB drive yedrayivu enomlawuli wemetri. I-eClip yazukiswa imbasa ye-Silver iDA kunye neGolide yeA 'Design Award. I-eClip ilula, ilingana nokutshixeka kwakho kunye nemisebenzi enjengephepha lokucwangcisa amaphepha akho, iirisithi kunye nemali. I-eClip ikhusela idatha yakho, ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, idatha yomqeshi, idatha yezonyango, kunye neemfihlo zorhwebo kunye nesoftware yezokhuseleko. I-eClip yenziwa nguFrohne eFlorida. Isinxibelelanisi sememori yegolide siyanyangeka, kukungavumi ukumelana namanzi, ukumelana notywala, ukumelana nothuli, ukumelana nomhlwa kunye nokunganyangeki kombane.
Umbane Wamandla Ityathanga lamandla elibonwe ngombane oguqulayo. Olu xinzelelo lunesibambo esijikeleze ama-360 ° kwaye luyema kwii-engile ezichazwe kwangaphambili. Ngokubanzi, abantu basika imithi ngokuthe tyaba okanye ngokuthe nkqo ngokuguqula iisarha zazo kwii-engile ezithile okanye bancame okanye bawenze amalungu abo omzimba. Ngelishwa, i-saw ihlala ishukuma ukusuka ekubambeni komsebenzisi okanye umsebenzisi kufuneka asebenze kwindawo enobunzima, enokubangela ukulimala. Ukwenza oku kunqabileyo, isarha ecetywayo ifakwe isiphatho esijikelezayo ukuze umsebenzisi akwazi ukulungelelanisa ii-angles zokusika.
Iseti Yetiyi Iphefumlelwe yi-travertine terata kwindalo, iWavy yiseti eya kukuzisela amava ekhethekileyo eti. Iiphatho ezinobuchule ziyaphuhliswa ukuze zikulungele kakuhle ezandleni zakho. Ngokugcina indebe ngentende yakho, uya kufumanisa ukuba ityhila njengenyibiba yamanzi kwaye ikukhokelela kumzuzu wokuzola.
Isitulo Esinengca Isitulo esinamavili se Baralho sinomzobo oyile ngoku owenziwe ziifom ezimsulwa kunye nemigca ethe tye. Yenziwe ngeefowudi kunye nee welds kwiipleyiti ze-aluminium ezihlanganisiweyo, esi situlo sixhasayo ngesibindi saso esifanelekileyo esicela umngeni ukuba namandla kwento. Iyakwazi ukudibanisa into enye, ubuhle, ukukhanya kunye nokuchaneka kwemigca kunye nee-angles.
Coca-Cola Tet 2014 Ukupakisha Iziselo Ezithambileyo Saturday 25 September
5 Elemente Iileyibhile Ye Wayini Friday 24 September
Calendar 2014 “Botanical Life” Ikhalenda Thursday 23 September
Ukuvelisa / Ukuvelisa Emva / Ukusasaza Umthwalo Wevili I-Usb Flash Drive Umbane Wamandla Iseti Yetiyi Isitulo Esinengca